फ्लपको यात्रा पनि थाकिनन् केकी! – Khabar Silo
फिल्म ‘स्वर’बाट ठूलो पर्दाको यात्रामा हिडेकी केकी अधिकारी अभिनयमा अब्बल अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छिन्। नेपाली फिल्म उद्योगमा केकीलाई बौद्धिक अभिनेत्रीको रूपमा व्याख्या गर्ने पनि छन्।
करियरको प्रारम्भिक चरणबाट नै केकीलाई फिल्मको कुनै खाँचो भएन। तर, अफसोच! उनी कहिलै हिट पनि हुन सकिनन्। एक पछि अर्को फिल्ममा केकीले अभिनय गरिरहँदा नेपाली फिल्म बजारमा उनको चर्चा चुलिनु कुनै नौलो थिएन।
तर, केकी अभिनित कुनै पनि फिल्मले नेपाली बक्स अफिसमा उत्कृष्ट ब्यापारको रेकर्ड राख्न भने सकेन। अभिनयमा तारिफकी पात्र बन्ने केकीको बक्स अफिस यात्रा निरास नै रह्यो।
‘फ्लप फिल्म बजारकी हिट हिरोइन्’ केकीका लागि ट्याग नै बन्यो। तर २०७६ साल भने केकीका लागि सुखद बनेको छ। उनी अभिनित फिल्म ‘छ मायाँ छपक्कै’ले बक्स अफिसमा गज्जबको व्यापार गरिरहेको छ।
फिल्ममा समावेस कथासँगै केकी अभिनय दर्शकले तारिफ गरिरहेका छन्। सरदर हिसाब गर्ने हो भने फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ केकीको करियरको २७औँ फिल्म हो। यही फिल्ममा पुगेर केकी अभिनय र बक्स अफिस कलेक्सनका हिसाबमा हिट बनेकी छन्। यतिबेला केकीले आनन्दको सास फेरेको महसुस गरेकी होलिन्।
फिल्म सफल बन्दै गएपछि केकीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानीका क्रममा विगतमा आफ्ना फिल्म नचल्दा कहिल्यै हार नमानेको बताउन थालेकी छन्। उनी आफूलाई संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी अभिनेत्रीको संज्ञा दिनपनि पछि परेकी छैनन्।
आफ्नो असफल फिल्म यात्रा सम्झदै केकीले भनेकी छन्, ‘दुई दर्जन फिल्म फ्लप दिइसकेँ। मेरो ठाँउमा अरु भएका भए विस्थापित भैसक्थे, त्यो मानेमा म भाग्यमानी हुँ।’
कपिल शर्माले फेरी एक पटक गरे चमत्कार, तीन वर्ष पुरानो अवतारमा कसरी आए ?
एजेन्सी । हास्य कलाकार कपिल शर्मा आफ्नो क्यारियर मा धेरै उतार चढावहरु देखेका छन्। एक समय, अभिनेता को क्यारियर रोकियो। ऊनी डिप्रेसनमा पनि गएका थिए । उनको तौल पनि निकै बढेको थियो । तर जहिले पनि कठिन समय जित्ने कपिल शर्माले फेरि सबैलाई चकित पारेका छन्। लकडाउनको क्रममा कपिलले आफ्नो फिटनेसमा कडा मेहनत गरेका छन्। […]
Posted on January 15, 2021 January 15, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वेता खड्का र विजयन्द्र सिंह रावतको विवाहको भोज आज काठमाडौमा भव्यताका साथ आयोजना गरिएको छ । अहिले चलिरहेको उक्त भोज कार्यक्रममा कलाकारहरुदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको छ । सिउँदोमा सिन्दुरले सजिएर ओठमा मुस्कान सहित श्रीमानको हात समाउदै जब स्वेता खड्काको ईण्ट्रि भयो, उपस्थित सबैको मन लोभिएको थियो । स्वेताको ओठमा मुस्कान र […]